Izici: Located in Manchester, 6% Assured Rental Returns, 10% Discount, Experienced Management Company
I-Regent Plaza iyindawo yentuthuko yezindawo zokuhlala eseqophelweni lomgwaqo iRegent Road, eSalford. Izindonga zaso zikude kakhulu neManchester City Centre, ezokwakha ubunikazi nokusebenza kwayo endaweni enhle, emzileni omkhulu odlulayo ongena nokuphuma eDolobheni. Amakamelo okulala azogcwaliswa ngezingubo zokugqoka ezifakiwe, izindlu zangasese ezine-Villeroy neBoch-style ceramic izinto zokufaka, amakhanda eshawa enamanzi afakwe odongeni nodonga oluhlanganisiwe lobumba namathayili aphansi.Izicabha ezinhle zephaseji zizongena emakhishini anethayela nasemakamelweni okulala agcwele ngokuphelele. Konke kuzoba namafasitela acwebezelayo anamafreyimu ama-aluminiyamu abhulashiwe, ama-radiator wephaneli, kanye nojantshi bamatley abashisayo kuzo zonke izindlu zangasese nakuma-en-suites. Ukubuka konke Kokutshalwa Kwezimali • Kutholakala eManchester • Ukubuyiselwa Kokuqashwa Okuqinisekisiwe okungu-6% • Amaphesenti ayi-10 esaphulelo • Ukubukwa Okumangazayo ekhonjwe ngabatshalizimali baphesheya kwezilwandle njengomthombo wamathuba, ngentuthuko enkulu yamasu.Utshalomali olubalulekile lwamazwe omhlaba lubandakanya iMedia City UK, ikhaya le-bbc; I-Airport City, okungenye yezinhlelo ezinkulu zokuvuselela kabusha e-UK neBeijing Construction Engineering Group, i-Cooperative £ 800m Noma, kanye nentuthuko entsha ye- £ 750m ku-First Street, enikeza inhlanganisela ephoqayo yamasiko, ezokuthengisa nezokungcebeleka. I-4.2% yonkana iManchester eminyakeni emihlanu ezayo, futhi idolobha liyikhaya lesinye sezilinganiso eziphakeme kakhulu zabaqashi abazimele e-UK (ku-26.85%), iManchester inikeza iziqinisekiso eziqinile njengenye yezindawo ezethembisayo kakhulu zokuthengwa kwezindawo i-UK.Izithombe Ezenziwe Ngekhompiyutha Zezinhloso ZemidweboSayizi Okuluklelisiwe okulinganisiwe. Uyacelwa ukuthi uthinte umenzeli ukuqinisekisa ubukhulu bangempelaXhumana nathi Namuhla ngokubonisana kwamahhala.